Uyenza njani iPin kwiPinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 290
Desde ukudala ibhodi yePinterestNokuba wenze isikhonkwane zizinto ezingathandabuzekiyo eziphucula umsebenzi oza kwenziwa kwiphepha. Enkosi kubo, amakhulu eenkampani kunye nabantu abathandabuzi ukuphucula intengiso kunye nemifanekiso yabo esemthethweni kwi-intanethi ngazo zonke iindlela abanokuzenza.
Ukwenza ipini ayisiyonto nje yolonwabo, enyanisweni inokunceda kakhulu abantu abafuna ukufumana iimpendulo kuyo nayiphi na imibuzo malunga namathuba emisebenzi okanye ngobomi babo. Oko kukuthi, a ipini inokuba yimpendulo yombuzo yomsebenzisi okanye isikhokelo osifunayo nakweyiphi na imeko.
IPinterest ngokungathandabuzekiyo lelinye lawona maqonga mahle awenzelwe ukuphuhlisa izinto ezinika ubomi kwiingcinga ezintsha. Enkosi kuwo onke amathuba amakhulu eeprojekthi Zenziwe ngoku kunye nokuvunywa kweengcali.
Zithini izikhonkwane zePinterest?
Nangona zibizwa ngokuba zizikhonkwane, le yimifanekiso emele umsebenzisi ngamnye ukubanika ulwazi oluchanekileyo noluchanekileyo ngesihloko esithile. Abantu abaninzi basebenzisa ithuba lokuqhuba udidi olunye lwezikhonkwane kunye nokulungelelanisa kwibhodi.
Ngokudalwa kwezi: "izikhonkwane" baye bakwazi ukwamkela iifayile ze- iindlela ezahlukeneyo zokufikelela kupapasho yemifanekiso esuka koyilo loyilo ukuya kwelona liyimfuneko. Uninzi lweempembelelo zithatha ezi ndidi zamanyathelo ukufumana amakhulu wamathuba kwihlabathi lomsebenzi.
Ipini inokwenziwa njani?
Nje ukuba uyazi zeziphi izikhonkwane ezisebenza ngaphakathi kwePinterest, kunokwenzeka ukuba ukwenziwa kwezi ndlela kuqhutywa ukufezekisa ngokufanelekileyo ithuba elikhokelwa kumathuba amahle abantu.
Amanyathelo okwenza ipini kwiPinterest
Kufuneka ucofe iqhosha u "+" ukukhetha iiphini ukhetho
Ukukhetha utolo oluphezulu lukhethiwe, okanye kunokwenzeka ukuba urhuqe kwaye ubambe into
Yongeza isihloko ngaphakathi kwipini ukuze ufumane ingqalelo yabantu okanye ikhonkco
Khetha ifoto okanye umfanekiso ofuna ukuwongeza
Okokugqibela, licebo elilungileyo ukuthumela olu khetho ebhodini kwaye uyixele
Njengoko ubonile ngaphambili, kulula kakhulu ukuba ube nakho ukufumana ipini ngaphandle kwenyathelo elininzi. Nangona kunjalo, into eza kwenza le mpumelelo ngumgangatho womfanekiso, Umxholo kwaye kongezwe koku konke ukubakho kokuhlala ngaphakathi kweso sixhobo.
Ngubani onokwenza izikhonkwane zePinterest?
Nabani na onengqondo yenza iakhawunti yePinterest ukuze wabelane ngeembono zakho, banokwenza ezabo izikhonkwane. Akunyanzelekanga ukuba ube nolwazi oluninzi malunga nayo, eyona nto iphambili kulo mbandela kukuba unamathele kwisihloko ofuna ukusiphatha eqongeni.
Kwelinye icala, ukuba unenkampani enkulu kunokwenzeka ukuba usebenzise abaphathi beendaba zosasazo kunye iiarhente zentengiso kwisikhundla umxholo.
1 Zithini izikhonkwane zePinterest?
2 Ipini inokwenziwa njani?
2.1 Amanyathelo okwenza ipini kwiPinterest
3 Ngubani onokwenza izikhonkwane zePinterest?
Ndifuna ukwazi ukuba ndingabeka njani ikhonkco kwi-Instagram?